Yintoni enokwenziwa kwiveki ephelileyo kwintengiso yemasheya? | Ezezimali
Ngeentsuku ezimbalwa kakhulu kude kuphele omnye unyaka wokurhweba, zimbalwa kakhulu izicwangciso onokujongana nazo zokuphela konyaka ngokusebenza ngakumbi ngokweziphumo. Nangona kunjalo, uneqhinga elingaqhelekanga lokujongana nonyaka ngethemba elikhulu. Emva ko-2018 izakuhamba nokwehla kwesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain into engaphezu kwe-10%. Kushiyeke iintsuku ezimbalwa kuphela ukuze ulungise iimpazamo osele uzenzile ukuza kuthi ga ngoku. Nangona ngaphandle kwamathandabuzo ngaphandle kwemiphumo engummangaliso njengoko unokuqonda.
Ukusuka kwimbono yezemali, inyathelo lokuqala onokulithatha ukusukela ngoku kukukhupha eyakho ukuphulukana nezikhundla. Ngesizathu esilula kakhulu sokuqonda kwaye kuhlala kwinto yokuba ezi ntshukumo ziphulukana nazo kwimarike yemasheya zinokubalwa kwingxelo yakho yengeniso elandelayo. Njani? Ewe, ngento elula njengokuyitsalela kwiinzuzo eziveliswe kwimpahla yakho yobuqu okanye yosapho. Ngale ndlela, akuyi kufuneka uhlawule imali eninzi njengakwimithambo yangaphambili okanye nakwezona meko zintle ukubuya kuya kuba nesisa. Ngayiphi na imeko, umahluko mkhulu kakhulu.
Ngayiphi na imeko, olona luvo lusebenzayo luqukethe izicwangciso onokuzisebenzisa ngoku ukwenza ukonga kunenzuzo ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ewe kunjalo, ezinye iindlela oza kuba nazo aziyi kuba ninzi kakhulu njengokuba unokucinga, kodwa ubuncinci baya kukunceda uphele unyaka ngeenyawo zasekunene. Ayisiyonto incinci njengoko intengiso yeemali zamashishini ezingenanzala emisiweyo ikwenzile kulolongezo lomsebenzi wokuthengisa kwimasheya. Ngaba uyafuna ukwazi ezinye izimvo ukwanelisa le mfuno? Ewe, nika ingqalelo encinci kuba inokukunceda ukuphucula ibhalansi yeakhawunti yakho yokonga.
1 Kwiveki ephelileyo: yiya kumaxabiso aqhubekayo
2 Ukoyisa ukuxhathisa
3 Khetha ezona ndawo zikhuselayo
4 Imisebenzi yorhwebo
5 Olunye uhlobo lotyalo-mali
6 Yiya kwiindawo zamanye amazwe
Kwiveki ephelileyo: yiya kumaxabiso aqhubekayo
Isicwangciso-qhinga sokuqala kutyalo-mali luvela kwimbono elula njengokumiselwa ngokusesikweni kwemisebenzi kukhuseleko olusecaleni okucacileyo, ngaphandle kwemiqondiso ephikisanayo. Kwaye ukuba kunokwenzeka ukuba nayo yiba nomfutho Kulungile, kulunge ngakumbi kwiminqweno yakho. Uya kuba nesibonelelo esithile ukuze kule veki iphelileyo imeko ingaguquki, into ebonakala ngathi ayinakulindeleka. Unokufumana inzuzo eyinkunzi enomdla kwaye eyona nto intle iya kuba kukuba lo msebenzi uyakwenziwa ngexesha elifutshane kakhulu eliya kuthi lincede izikhundla zakho kutyalomali lwexeshana ojamelene nalo okwangoku.
Enye yeemeko ezintle onokuthi uye kuzo ngeli xesha likhethekileyo lonyaka kukufumana ezo zixabiso zixhaswe ngokwaneleyo kukuchasana ababenako kude kube ngoku. Iya kuba ngumqondiso onamandla kwi ukuqhubeka kokunyuka kwiimarike zezabelo. Kodwa hayi ngamagama amafutshane kuphela, kodwa nakwisiqhelo kunye nexesha elide, onokuthi wandise ngalo ixesha lokuhlala iiveki ngakumbi okanye iinyanga. Akumangalisi ukuba esi sesinye sezicwangciso zotyalo mali ezingasokuze zisilele kuba sinokuthenjwa okukhulu kuwo onke amanqaku ocinga ngoku ukusukela ngoku.
Khetha ezona ndawo zikhuselayo
Icebo lokugcina ngakumbi liya kuba kukuthenga izabelo kwezinye zeenkampani ezidwelisiweyo. Mhlawumbi inzala oyifumanayo kule mi sebenzi ayigqithisi, kodwa ubuncinci awuyi kuphulukana nezixa ezixabisekileyo okanye ziyakuchaphazela kwityala lakho lokonga imali. Nangona eyona nto icetyiswayo kukuba izitokhwe zikwindawo ezingcono zokuthatha uhambo olunyukayo kwezi ntsuku zimbalwa zihleliyo kude kube sekupheleni kwalo nyaka. Kwelinye icala, ezinye zezi zokhuseleko zinezahlulo eziphezulu kakhulu, phakathi kwe-5% ne-7% ngokubhekisele kwiinkampani zombane.
Kwabatyali mali abanoburhalarhume kwiimarike ze-equity, kukho isicwangciso esinokubanomdla kakhulu kubo. Nangona ngexabiso lokuthatha umngcipheko ngakumbi kwezinye iindlela ezichazwe apha ngasentla. Isekwe kulondolozo olunenzuzo ngendlela ekhawulezayo kwaye ebonakalayo kwimisebenzi yangaphakathi, okanye njengoko yaziwa ngcono, iphuhlisiwe kwiseshoni efanayo yorhwebo. Nangona kunjalo, ukwamkela le modeli yotyalo-mali akuyi kubakho sigqibo ngaphandle kokujonga nokufumana ezona stock zimbi. Oko kukuthi, babonisa umahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi. Ukuze usebenzise la mahluko ubaluleke kakhulu, nangona oku kuyakufuneka ukubonelela ngemfundo enkulu kolu hlobo lwemisebenzi ekhethekileyo.
Olunye uhlobo lotyalo-mali
Ewe, umbono oluncedo kakhulu kule veki iphelileyo yalo nyaka siwushiyayo kukukhetha ezinye iimarike. Inenzuzo yokuba unokufumana umdla onomdla ngakumbi kunangaphambili. Ingakumbi ukuba baphantsi kwe- indlela yokucacisa ngokucacileyo kuba indlela eya phezulu ingaphezulu kakhulu. Omnye wale mizekelo wenziwe ziimarike zesinyithi ezixabisekileyo, nezithi ekupheleni konyaka zibonise ukuxabiseka okukhulayo kumaxabiso abo. Kungade kube lixesha lokutyala imali kwezi asethi zemali kwaye ngakumbi kwigolide. Nangona kuya kufuneka ingabikho kwimarike yemasheya njengoko zingadweliswanga kwizalathiso zesiko.
Yiya kwiindawo zamanye amazwe
Awunyanzelekanga ukuba uzikhawulele kwiimarike zasekhaya kwaye isenokuba lixesha lokushiya imida yethu uye ku Uninzi lwezabelo ezikhoyo emhlabeni. Akumangalisi ukuba umahluko ubaluleke kakhulu, usasazeka ngaphezulu kwe-20% okanye nangaphezulu kwezinye iimeko ezithile. Kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kwindaleko yezalathiso eziphambili zamanye amazwe ukuphuhlisa ukusebenza ngokukhawuleza nangaphambi kokuphela kwalo nyaka unzima. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha ezijolise ngakumbi kwixesha eliphakathi nelide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Yintoni enokwenziwa kwiveki ephelileyo kwintengiso yemasheya?